Shabaabka ku Sugan gobolka shabeelada Hoose oo weerar lagu qaaday. – The Voice of Northeastern Kenya
Shabaabka ku Sugan gobolka shabeelada Hoose oo weerar lagu qaaday.
Wararka ka imaanaya degmada janaale ee gobolka shabeelada hoose dalka Soomaaliya ayaa kusoo waramaya in degmadaasi uu xalay dagaal culus ku dhax maray xoogaag ka tirsan Ururka AL-shabab iyo ciidanka dowlada Soomaaliya oo garabka ka helaya kuwa Mareykan ah.
Ciidamo Mareykanka ah oo ka dagay diyaarado dagaal ayaay wararku sheegayaan inay duleedka Degmada Janaale uu dagaal ku dhexmaray Xubnaha AL-shabaab.
Wallow aan si dhab ah loo ogeyn Khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi haddana Saraakiil ka tirsan Ciidanka Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in AL-Shabaab khasaare lagu gaarsiiyay weerarka.
Wararku waxay intaasi raacinayaan in dagaalka ay barbar socdeen, duqeyn ay Diyaarado ka fulinayeen gudaha Degmada Janaale.
Warar kale ayaa Tilmaamaya inay duqaymaha qaarkood guryo dad shacab ah ay dagan yihiin,halka ay jiraan goobo Shabaab ay ku sugnaayeen oo duqeynta qaar ka mid ah lala beegsaday wallow aan Faahfaahin dheeraad ah xili hore la helin.
Marka laga soo tago sheegashada saraakiisha amaanka dowlada Soomaaliya ee ku aadan weerarkaasi Hadana xoogaga AL-shabab wali kama aysan hadlin dagaalka kadhacay Degmada Janaale ee gobolka shabeelada Hoose.
← Wasiirka Amniga maamulka Hirshabeele oo cabasho u diray xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya.
Dadka wax Tahriibiyo ee deegaanada Puntland ku sugan oo digniin loo diray. →